The Curtain Iofisi Yokuthengisa - Imagazini yoyilo
Iofisi Yokuthengisa Uyilo lwale projekthi lunendlela eyahlukileyo yokusebenzisa iMetal Mesh njengesisombululo sesizathu esisebenzayo kunye neseti. I-Metlu Mlu ekhuselayo idala ungqameko lwesitshixo esinokuthi senze umda phakathi kwendawo yangaphakathi nangaphandle- indawo yegrey. Ubunzulu besithuba esenziwe ngumphambili wetrlucent kudala inqanaba lesityebi somgangatho. Intsimbi ye-Metal Mesh engenasiphene iyahluka phantsi kweemeko zemozulu ezahlukeneyo kunye nexesha elihlukeneyo losuku. Ukubonakaliswa kunye nokudlakazeliswa kweMesh enomhlaba ocekeceke kwenza indawo yaseTshayina ezolile yeZEN.
Igama leprojekthi : The Curtain, Igama labayili : Qun Wen, Igama lomthengi : aoe.
Iofisi Yokuthengisa Qun Wen The Curtain